Inkampani | Eyenkanga 2021
Ulwazi Lweziyobisi Imidlalo Enzima Inkampani, Imfundo Yezempilo Uluntu, Impilo Iziyobisi Vs. Umhlobo Imfundo Yezempilo, Impilo Uluntu, Inkampani Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Ekuhlaleni Impilo Impilo-Ntle Ukuzonwabisa Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Iindaba Inkampani, Iindaba
Ubhaliso oluvulekileyo lwe-ACA: Into ekufuneka uyazi malunga nezicwangciso zempilo ze-2021
Ixesha lokubhalisa elivulekileyo le-ACA lahlukile kurhulumente ukuya kurhulumente. Kuya kufuneka ubhalise ngomhla obekiweyo okanye umngcipheko wokuphulukana nokukhathalelwa kwezempilo kude kufike ukubhaliswa okuvulekileyo okulandelayo.
Ngaba uzilungele iindleko zonyango ngexesha lomhlala-phantsi?
Umhlala-phantsi kufuneka agcine i-inshurensi yezempilo emva kokuthatha umhlalaphantsi. Cwangcisa iindleko zonyango kumhlalaphantsi ngokufunda ukuba zeziphi iindlela onokukhetha kuzo.
Nazi iindlela ezilungileyo zomshuwalense wezempilo kubantu abazisebenzelayo
Uziqeshile? Bhrawuza ukhetho lweinshurensi yezempilo apha kwaye ufunde ukuba uza kuthathela ingqalelo ngaphambi kokukhetha esona sicwangciso seinshurensi yezempilo yakho.
Abasebenzisi be-singleCare babona ukonga okukhulu kwezi ziyobisi zili-10
I-singleCare inokulondolozwa ngugqirha kumachiza amawaka. Nanga amayeza ali-10 onokuwagcina kakhulu kwikhadi lethu lesaphulelo.
I-RxSense iphumelele amabhaso okuQala abaQeshi baseMelika 2021
I-RxSense ichaze omnye wabaqeshi abalungileyo kuma-500 okuqala. Udumo, ukwaneliseka kwabasebenzi, kunye nokukhula kwenkampani yayiyindlela yokuwongwa kweForbes.
Amachiza athandwa kakhulu kwi-SingleCare ngoMeyi
I-Beta blockers kunye namayeza e-thyroid asindisa ubomi unyaka wonke. Ke kutheni le nto kukho amayeza amaninzi azalisa ukuphela kwexesha lokubanda kunye nomkhuhlane? Iingcali ziyacacisa.
Ezona ziyobisi zidumileyo kwi-SingleCare ngo-Epreli
Unyango lwegazi oluphezulu zezona ziyobisi zithandwayo zizaliswe yi-SingleCare ngo-Epreli. Ngoba? Abantu abaninzi banexinzelelo lwegazi.
Ndingayisebenzisa i-SingleCare kwiziyobisi ezinamagama kraca?
Amachiza enziwe afana nalawo aveliswe ngumenzi anokuba ngama-85% ngexabiso eliphantsi kunegama lophawu, kodwa ngamanye amaxesha uhlobo oluthile alufumaneki. Funda ngendlela yokusebenzisa i-SingleCare yokonga imali kumachiza anegama lophawu.
Yimalini unyango lomhlaza wamabele kwi-US?
Iindleko zonyango lomhlaza webele ziqikelelwa kwi- $ 20,000 ukuya kwi-100,000, kodwa iyahluka ngohlobo lonyango kunye nenqanaba lomhlaza. Siphula iindleko zomhlaza kwaye sikunike iindlela ezi-5 zokonga.
Ndingayisebenzisa i-SingleCare ukuba ndikwi-Medicare?
Ungasebenzisa ikhadi lethu lokonga ikhemesti nokuba uyakufanelekela ukufumana izibonelelo zeMedare. Akukho mthethweni, okanye ngokuchasene nemigaqo. Nantsi indlela.
Yintoni i-inshurensi yempilo eyintlekele?
Ukuba awukwazi ukuhlawula i-inshurensi yemveli, kukho enye indlela: i-inshurensi yezempilo eyintlekele. Nantsi indlela yokwazi ukuba ikulungele na.
Umphathi we-SingleCare u-Rick Bates ukuba kutheni aqale i-SingleCare
Imeko yokhathalelo lwempilo e-US inzima kwaye ihlala itshintsha-yiyo le nto u-CEO we-SingleCare u-Rick Bates athethe ngayo kwi-HealthCare Consumerism Radio.
Onke amayeza kwi-SingleCare angaphantsi kwe- $ 10
Fumana imirhumo ye- $ 10 nge-SingleCare kubandakanya i-antibiotics, iyeza lokunyanga, amayeza oxinzelelo lwegazi, kunye nokunye. Fumana phantse ama-50 amayeza aphantsi.
Ngaba ujonga amayeza aphantsi eRx? Nantsi imigqaliselo yexabiso eliphantsi onokuyifumana ngamakhuphoni e-SingleCare, asimahla kwaye anokuphinda asebenze kuko konke ukuzalisa.
Ezi zezona klasi zamachiza zazaliswa kakhulu kwi-SingleCare ngo-2020
Zeziphi iintlobo zamayeza abantu baseMelika abazithathileyo kwi-2020? I-antihypertensives, anti-depressants, kunye neearhente ze-thyroid zezinye zeeklasi eziqhelekileyo zeziyobisi.
Yintoni umThetho weZinto eziLawulwayo?
Umthetho oLawula amaTyala ka-1970 usasebenza kwaye unokuchaphazela ukumiselwa kwakho. Funda indlela yokugcwalisa amayeza amayeza kwinto elawulwayo.
Nguwuphi umahluko phakathi kokutsalwa okuphuma ngaphandle kweepokotho?
I-inshurensi ayizukungena ngaphakathi de uchithe imali ethile kukhathalelo lwempilo. Ukucacisa ukuba yeyiphi ebalulweyo kunciphiso lwakho oluphezulu ngaphandle kwepokotho.
Nguwuphi umahluko phakathi kokutsalwa kunye nepremiyamu?
Uninzi lwabantu lukhetha i-inshurensi yezempilo esekwe kwimali ehlawulweyo xa kuthelekiswa neprimiyamu. Kunini apho kufaneleke ukurhweba ngokutsalwa okuphezulu kwepremiyamu esezantsi kwaye ngokuchaseneyo?
Ezona ziyobisi zidumileyo kwi-SingleCare ngo-Agasti
Imigqaliselo ephezulu egcwalisiweyo ngo-Agasti ngamayeza e-dermatological for allergies, acne, kunye nezinye iimeko zolusu-yiyo loo nto ukhathalelo lolusu ehlotyeni lushushu.
Nguwuphi umahluko phakathi kwepopay vs.
Esi sikhokelo siza kukunceda uqonde ngokukhawuleza umahluko phakathi kwepopay vs deductible kunye nendlela onokuziphepha ngayo iindleko zokhathalelo lwempilo.
Uyintoni umahluko phakathi kwe-adderall kunye ne-vyvanse?
ungalinda emva kwexesha elingakanani ukuthatha isicwangciso b
lubiza malini ugqirha wamayeza ngaphandle kwe-inshurensi
Ungathatha i-nexium kunye ne-prilosec kunye
leliphi iyeza lentloko endinokulithatha notywala